Aoka Ianao ho Mendrika ny ho Naman’Andriamanitra
Tena ilaina ny fitiavana. Ho tia kokoa an’i Jehovah ianao, arakaraka ny ianaranao momba azy. Manjary te hanompo azy ianao, rehefa mitombo ny fitiavanao azy. Haniry ho lasa mpianatr’i Jesosy Kristy koa ianao amin’izay. (Matio 28:19) Afaka ny ho naman’Andriamanitra mandrakizay ianao, raha miaraka amin’ny Vavolombelon’i Jehovah, izay mifankatia toy ny mpianakavy. Inona àry no tsy maintsy hataonao?
Tsy maintsy mankatò ny lalàn’Andriamanitra ianao, raha tena tia azy. “Izao no fitiavana an’Andriamanitra, dia ny itandremantsika ny didiny. Tsy mavesatra anefa ny didiny.”—1 Jaona 5:3.
Ampiharo izay ianaranao. Nanao fanoharana mifandray amin’izany i Jesosy. Nisy lehilahy hendry nanao trano teo ambony vatolampy. Nisy lehilahy adala kosa nanao trano teo ambony fasika. Rehefa nisy oram-be nivatravatra, dia tsy rava ilay trano teo ambony vatolampy. Nirodana kosa ilay teo ambony fasika, sady mafy ny fianjerany. Nilaza i Jesosy fa toy ilay lehilahy hendry nanao trano teo ambony vatolampy, izay mihaino ny fampianarany ka mampihatra izany. Izay mihaino nefa tsy mampihatra kosa, dia toy ilay lehilahy adala nanao trano teo ambony fasika. Iza amin’ireo àry no tianao?—Matio 7:24-27.
Fanoloran-tena. Ny hoe manolo-tena dia mivavaka amin’i Jehovah, ka milaza aminy fa te hanao ny sitrapony mandrakizay ianao. Tena mpianatr’i Jesosy Kristy ianao, raha manao ny sitrapon’Andriamanitra.—Matio 11:29.
Batisa. “Aoka hatao batisa ianao ka hiantso ny anarany mba ho voasasa ho afaka amin’ny fahotanao.”—Asan’ny Apostoly 22:16.
Manompoa an’Andriamanitra amin’ny fo manontolo. “Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin’ny fo manontolo toy ny ho an’i Jehovah, fa tsy ho an’olona.”—Kolosianina 3:23.